Xinhua Myanmar - ဆွာချောင်း ရေဘေးသင့် ပြည်သူ့များအတွက် ထောက်ပံ့ကူညီမှုများပေးအပ်
ျပန္လည္ျပဳျပင္ေနစဥ္ ကားမ်ား သြားလာေနသည့္ ရန္ကုန္ - မႏၱေလး အျမန္လမ္း ဆြာေခ်ာင္းတံတားအားေတြ႔ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Social
“ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေ အရင်ထက် ပိုမြန်လာပါပြီ၊ ရှစ်လပိုင်း ၁၆ ရက်နေ့မှာ အမြန်ပြန် လည်ထူထောင်ရေး အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခဲ့ရာမှာ လယ်/ဆည် ဝန်ကြီးဌာနရော လူ ကယ် ပြန် ဝန်ကြီး ဌာန ရော တခြား ဆက်စပ်ဌာနတွေရော ပါတော့ ဌာနဆိုင်ရာတွေမှာ လိုအပ်တဲ့ ဘတ်ဂျက် ရှိတယ်၊ သဘာ၀ ဘေးအတွက် လျာထားတဲ့ စီမံချက်တွေရှိတယ်၊ အဲဒါတွေကို အမြန်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး အဖွဲ့က သမ္မတဆီ တင်ပြပြီးတော့ အမြန်ဆုံး ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်၊ လယ်တွေ ပျက်စီးတာက အစ အမြန်ပြန်စိုက်ပျိုးနိုင်ဖို့ ပြန်ပေးတာတို့၊ လမ်းတံတားတွေကို အမြန် ပြန်ပြင်တာတို့၊ ဘတ်ဂျက် လျာထားမှုထဲ မပါတာတွေအတွက်လည်း သမ္မတ အရန် ရန်ပုံငွေထဲက အသုံးပြု ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး လုပ်ငန်းတွေက အခုနောက်ပိုင်း ပိုပြီးတော့ မြန်ဆန် သွက်လက်လာတာကြောင့် ရေဘေးသင့် ဒေသ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေ ပိုမို မြန်ဆန်လာပါတယ်” ဟု ရေတာရှည်မြို့အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၌ တွေ့ဆုံစဉ် ၎င်းက ဖြေကြားခဲ့သည်။
လောလောဆယ်၌ ကျောင်း၊ လမ်းတံတားများကို ဦးစားပေး ဆောက်လုပ်ပေးလျက်ရှိပြီး ရေဘေး ကြောင့် ပျက်စီးခဲ့သည့် အိမ်များ ဆောက်လုပ်နိုင်ရန် သက်သာချောင်ချိရေး အကူအညီများ ပေးလျက် ရှိရာ ရေဘေးသင့် မိသားစုများအား တန်ဖိုးနည်း အိမ်ယာများ ဆောက်လုပ်ပေးရန် စီစဉ်ထားကြောင်း ၎င်းက ရှင်းပြခဲ့ သည်။
ရေတာရှည်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် အလှူရှင်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများလှူဖွယ် ပစ္စည်းစာရင်း တွက်ချက် လက်ခံနေစဉ် (ဆင်ဟွာ)
Power China ၏ လှူဖွယ် ပစ္စည်းများရောက်ရှိစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ရေတာရှည် မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက Power China ထံ ဂုဏ်ပြုလွှာ ပေးအပ်စဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဆွာ မြို့ စက်ရုံကျောင်းတိုက် ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းအတွက် ကျောင်းထိုင် ဆရာတော်ထံ Power China လှူဖွယ်ပစ္စည်းများ ပေးအပ်စဉ် (ဆင်ဟွာ)
ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းမှ မိသားစု အချို့အားတွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ရေမြုပ်ဒေသ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် ယခင်အပတ်က အမေရိကန် ဒေါ်လာ တစ်သိန်း လှူဒါန်းခဲ့သည့် Power China Int’l Group Lid. က ရေဘေးသင့် ပြည်သူတို့အတွက် ဆန် နှစ်ကီလို အိတ် ၃၀၀၀၊ ပဲဆီ တစ်ပိသာ ဘူး ၃၀၀၊ ကွတ်ကီးထုပ် ၁၁၄၀၊ ခေါက်ဆွဲခြောက် ၄၃၂၀ ထုပ်တို့ကို ၁၂ ဘီးကားကြီးနှစ်စီးဖြင့် စက်တင်ဘာ ၇ ရက်က လာရောက်လှူဒါန်းခဲ့ကြသည်။ ထို့အတူ Power China Int’l Group Lid. မှ ဆည်မြောင်း တမံ ဆိုင်ရာပညာရှင်အဖွဲ့သည် ဆွာချောင်းတမံအပါအဝင် ရေမြုပ်ဒေသ အတွင်း အချိန်ယူ ကွင်းဆင်းလေ့လာကာ နည်းပညာပေး တွေ့ရှိချက်များကို တွေ့ရှိချက်များကို လယ်ယာ၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနသို့ အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
Power China Int’l Group Lid. အဖွဲ့သည် ရေတာရှည် ထွေ/ အုပ်ရုံးကို့ ရိက္ခာ ကားကြီးနှစ်စီး လှူဒါန်း အပ်နှံအပြီးတွင် ရေဘေးသင့် ပြည်သူများအား ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ တွေ့ဆုံ လှူဒါန်းနိုင်ရန် အပို သယ်ဆောင်လာသော ရိက္ခာတင် ကားငယ်လေးတစ်စီးနှင့် အတူ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတည်ရှိရာ ဆွာမြို့ရှိ စက်ရုံကျောင်းတိုက်သို့ ထွက်ခွာခဲ့ကြပြီး ကျန်ရှိနေသေးသော ရေဘေးသင့် ပြည်သူများအား ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ကြသည်။
စက်ရုံ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတိုက် ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းတွင် အက်လက် မှီခိုနေဆဲ ရေဘေးသင့် မိသားစု ၄၀ ကျော်တို့တွင် ဆွာမင်းလမ်း ကျေးရွာမှ အသက် ၁၀၈ နှစ် ရှိသော အဘွား ဒေါ်သန်း ကြည် နှင့် အသက် ၉၈ နှစ် ရှိ ၎င်း၏ ခင်ပွန်း အဘ ဦးတင်ဦး တို့ကိုလည်း တွေ့ရသည်။ အဘက၊ “ရေလာပြီဆိုတော့ ရေဆင်းလမ်းနဲ့ ကျုပ်တို့အိမ်က ဦးတိုက်ပဲ၊ တည့်တည့်ပဲ၊ ကြားမှာ ကားလမ်းပဲ ခြားတယ်၊ ရေလည်း တစ်ဟုန်ထိုး ဆင်းလာရော သမီးက ကျုပ်တို့ကို သုံးဘီးကာပေါ် အတင်း တင်ပြီး ဒီကို မောင်းပို့လို့ သီသီကလေး လွတ်ခဲ့တာ၊ အိမ်ရော ပစ္စည်းတွေရော အားလုံးပါသွားတယ်၊ ဒီထက်ကြီးတဲ့ ဒုက္ခတော့ မရှိတော့ပါဘူး၊ ဒီဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ နေရတာ အဆင်ပြေပါတယ်၊ ရွာကို တော့ အိမ်ဆောက်ပြီးမှပဲ ပြန်တော့မယ်၊ အလှူရှင်တွေကိုလည်း အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်”ဟု ဆင်ဟွာကို ဖြေကြားသည်။
ထို့အတူ ရေဘေးကြောင့် နေအိမ်များ ပျက်စီးသွားပြီး မပြန်နိုင်သေးသည့် မြောက်လွတ်ကုန်း ကျေးရွာ နှင့် မိသားစုများကလည်း နိုင်ငံတော် အစိုးရကိုနှင့် အလှူရှင်များ အားလုံးအား ပြောမပြတတ်အောင် ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်သမျှ ရှိသမျှ အားလုံး ရေထဲပါကုန်သော်လည်း ထောက်ပံ့ ကူညီမှုများ၊ ပြန်လည်ထူထောင်ပေးမှုများ ရှိသဖြင့် ဝမ်းမြောက်မိကြောင်း ဖြေကြားခဲ့ကြသည်။ (Xinhua)
Previous Article တရုတ် နိုင်ငံ Blue Sky ကယ်ဆယ်ရေး အသင်း က မြန်မာ နိုင်ငံ တွင် အရေးပေါ် ကူညီကယ်ဆယ်ရေး သင်တန်း လာရောက် ပို့ချ
Next Article တရုတ် နိုင်ငံ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေး ဖောင်ဒေးရှင်း မြန်မာ နိုင်ငံ ရုံးခွဲ နှင့် စီမံကိန်း ဖော်ဆောင်ခြင်း ၃ နှစ်ပြည့် အခမ်းအနား ကျင်းပ